Xukuumadda Libya oo shaaca ka qaaday in ay dib u qabsatay airport-ka Tripoli – SBC
Xukuumadda Libya oo shaaca ka qaaday in ay dib u qabsatay airport-ka Tripoli
Tripoli:-Ciidanka xukuumadda Libya ayaa dib u qabsaday airport-ka Tripoli kadib markii ay la wareegeen kooxo hubaysan oo dalbanaya in la sii daayo hogaamiyahooda ay sheegeen in uu u xiran yahay booliska Tripoli.
Airport-ka caalamiga ayaa waxaa kadhacay maalintii shaley iska hor imaadyo kadib markii ay xoog ku galeen kooxo careysan kuwaasi oo saarnaa baabuurta tiknikada kuwaasi oo ku qasbay maamulka airport-ka in ay baajiyaan safarada duulimaadyada.
Wakaaladda wararka rasmiga Libya oo soo xiganaysa goobjooge ayaa sheegtay in kuwa soo weeraray airport-ka ay doonayeen in xukuumadda ay ku cadaadiyaan in ay shaaca kaqaado arrinta afduubka hogaamiyahooda lagu magacaabo Abuu Cajiila Al-xabashi.
Afhayeenka golaha qaranka KMG ninka lagu magacaabo Maxed Al-xariiri ayaa sheegay marsii horeysay in baartiaan uu socdo oo lagu ogaanayo sababta keentay in la afduubo hogaamiyaha kooxda lamagac baxday Al-oofiyaa.
Kaaliyaha wasiirka arrimaha gudaha Libya Cumar Khadraawi ayaa sheegay in xukuumaddu ay si buuxdo gacanta ugu hayso airport-ka islamarkaana kooxihii soo weeraray lagala wareegay hubkooda gacantana lagu dhigay.